घर र सवारी साधन किन्नको लागि कस्तो हुदैछ मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था ? - Aarthiknews
घर र सवारी साधन किन्नको लागि कस्तो हुदैछ मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था ?
काठमाडौं । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । बैंकमा तरलता पनि प्रर्याप्त भएको र व्यवसायी पनि थला परेको यो अवस्थामा नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेर व्यवसायलाई रिभाइभ गराउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
कोभिडको यो महामारीमा यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई अझ व्यवस्थित र प्रतिफल योग्य बनाउन राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको हो । यस क्षेत्रमा हुने लगानीलाई विशेषतः अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अनुत्पादक लगानी भनेर अर्थाउँदै आएका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकबीच सहकार्य